Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Barbados » Barbados Fizahan-tany mitady CEO vaovao
Barbados Tourism mitady CEO vaovao satria mikasa ny hiala ny talen'ny CEO Interim Petra Roach
Barbados Tourism Marketing Inc. dia mitady CEO vaovao hanome ny fitarihana stratejika, torohevitra ary tari-dàlana ho an'ny sehatry ny fizahantany Barbados.
Mihazakazaka mifanaraka amin'ny fizotran'ny taona 2020 miaraka amin'ny fiovana maro eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany, Barbados fizahantany dia eo am-pitadiavana tale jeneraly vaovao.
Ny tale jeneraly vonjimaika amin'izao fotoana izao dia hiala handray andraikitra vaovao miaraka amin'ny Grenada Tourism Authority.
Ny fangatahana dia ekena hatramin'ny 27 Mey 2021.
Ny tale jeneralin'ny vonjimaika ankehitriny, Petra Roach, dia handeha hitodi-doha any Grenada handray fotoana vaovao miaraka amin'ny Grenada Tourism Authority.
Ny taona 2020 dia nahita ny fiovan'ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany amin'ny ambaratonga haingana sy mbola tsy nisy hatrizay, miteraka fanamby lehibe ho an'ny indostria nefa koa miteraka voka-pivoarana vaovao ho an'ny toerana voalohany. Ny tale jeneraly vaovao dia hamolavola paikady mety amin'ny fitantanana mahomby ny lahasa marketing ho an'i Barbados mba hampitomboana ny fandraisan'anjaran'ny fizahan-tany amin'ny tanjona toekarena sy sosialy nasionaly.
The Barbados Tourism Marketing Inc. ny mandat dia ahitana ny famolavolana sy fampiharana paikady marketing ho fampiroboroboana mahomby ny indostrian'ny fizahantany amin'izay mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy fampivoarana ny fahafaha-miasa. Manohitra an'io toe-javatra io, ny Barbados Tourism Marketing Inc. dia miara-miasa amin'ny Profiles Caribbean Inc. hitady mpitarika orinasa mifantoka amin'ny lafiny varotra sy manova ny fahaizan'ny CEO, hiantohana fa i Barbados no toerana tsara toerana miroborobo amin'ity sehatry ny tsenan'ny fizahantany ity.
Ny andraikitry ny CEO
Ny CEO dia hanao tatitra mivantana amin'ny filankevi-pitantanana, manome ny fitarihana stratejika, torohevitra ary torolàlana ho an'ny Fizahan-tany Barbados sehatra. Ny CEO dia hamolavola paikady mety amin'ny fitantanana mahomby ny lahasa marketing ho an'i Barbados mba hampitomboana ny fandraisana anjaran'ny fizahan-tany amin'ny tanjona toekarena sy sosialy nasionaly.